महिलाहरू शिव साधना किन बढी गर्छन् ? - Mero LifeStyle Mero LifeStyle
महिलाहरू शिव साधना किन बढी गर्छन् ?
भगवान शिवको स्वरुपलाई महिलाहरूले बढी मन पराउँछन्
भवानी प्रसाद खतिवडा,संस्कृतिविद्
विशेष गरी महिलाहरू पुरुषको तुलनामा बढी व्रत बस्ने गर्छन् । अझ महिलाहरू विशेषतः महादेवको पूजा अर्चना र व्रत बस्ने गरेको पाईन्छ । सरसर्ती हेर्दा श्रीस्वस्थानी व्रत, तीजको व्रत, महाशिवरात्री, साउनको सोमवार, बालाचतुर्दशी तथा अक्षय तृतीया जस्ता तिथिहरूमा महिलाहरूले बढी महादेवको पूजा र आराधना गर्छन् ।
विवाहित महिला घर र परिवारमा सुख समृद्धि र पतिको लामो आयु होस् भनेर व्रत बस्छन् । अविवाहित युवतीहरू राम्रो श्रीमान पाउँ भनेर व्रत बस्ने चलन छ । भगवान शिव पुरुषको प्रतीक हुनुहुन्छ । महिला शक्तिको प्रतीक भएको र भगवान शिव पुरुषको प्रतीक भएको तथा शिव र शक्तिको सन्तुलन भएर मात्र यो सृष्टि चलेको हुनाले महिलाहरूले शिवको विशेष अराधना गर्छन् ।
किन शिव साधना ?
भगवान शिव पुरुषको प्रतीक हुनुहुन्छ । महिला शक्तिको प्रतीक भएको र भगवान शिव पुरुषको प्रतीक भएको तथा शिव र शक्तिको सन्तुलन भएर मात्र यो सृष्टि चलेको हुनाले महिलाहरूले विशेष शिवको अराधना गर्छन् । शिव र शक्तिको बीचमा अन्योन्याश्रित सम्बन्ध छ ।
अर्को सामान्य मानवीय दृष्टिले हेर्ने हो भने महिलाहरूको हृदय एकदमै कोमल, पवित्र र अति निर्मल हुन्छ । स्वच्छ र कोमल मन भएका महिलाहरू सबैको कल्याण होस्, सबैको भलो होस् र कसैले पनि दुःख कष्ट भोग्नु नपरोस् भन्ने भावना महिलामा हुन्छ । त्यसैले परिवार एवम् सम्पूर्ण जगतको कल्याण होस् भन्ने भावनाका साथ महिलाहरू भगवान शिवलाई पूज्छन् ।
भगवान शिवको स्वरुपलाई महिलाहरूले बढी मन पराउने गरेको पाइन्छ । पहिलेदेखि नै श्रीस्वस्थानी व्रत कथा तथा शिव पुराणहरूमा पनि महिलाहरूले शिवजस्तो पति पाउँ भनेर व्रत बसेको पनि हामीले सुन्दै र पढ्दै आएका छौ । शिव पुराण तथा श्रीस्वस्थानी व्रत कथामा भगवान शिवको स्वरूप तथा उनको शक्तिको बारेमा गरिएको वर्णनहरूबाट पनि महिलाहरू प्रभावित भएको हुन सक्छन् । व्रत बस्दा चित्त शुद्ध हुन्छ र मन पनि शुद्ध हुन्छ । मन तथा चित्त शुद्ध भयो भने त्यहिबाट शान्ति, सुख र ऐश्वर्य प्राप्त हुन्छ । त्यसैले महिलाहरू शिव साधना गर्न बढी मन पराउँछन् ।
प्रस्तुति : सुमित्रा लुईटेल